चाडका राष्ट्रपति इदरिस डेबीको उपचारका क्रममा निधन - Lekhapadhi विश्व घटनाक्रम : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
चाडका राष्ट्रपति इदरिस डेबीको उपचारका क्रममा निधन
लेखक : लेखापढी ८ बैशाख २०७८, बुधबार ०९:५२ मा प्रकाशित
अफ्रिकी मुलुक चाडका राष्ट्रपति इदरिस डेबीको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । गत साता उनी देशभित्रका विद्रोहीसँगको भिडन्तमा परेर घाइते भएका थिए । ६८ वर्ष उमेरका डेबी करिब तीन दशकसम्म सत्तामा रहे । उनी अफ्रिकामा सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन
गर्ने राजनीतिज्ञ मध्ये पर्छन् ।
एक प्रशिक्षित सैनिक अधिकारी डेबी सन् १९९० मा एक सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट सत्तामा आएका थिए । आम निर्वाचनको नतिजा आउनु एक दिन अघि उनको निधन भएको छ । चुनावमा उनको पार्टी विजयी हुने र उनी छैठौं पटकका लागि निर्वाचित हुने अनुमान गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिको निधनसँगै सरकार र संसद भंग गरिएको छ । देशमा कर्फ्यू लगाइएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गरिएको छ । शुक्रबार उनको राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार हुनेछ ।
इतिहासमा आज अगस्त- ६:
ईतिहासमा आजको दिन के भएको थियो ? थाहा पाउनुहोस ।
ईतिहासमा आज : The Fatman !!!
इतिहासमा आज २३ अगस्त